Shaqooyinka badankooda waxaa shuruud u ah inaad haysato waxbarasho aasaasi ah. Adigoo ka faa’iideysanaya taageerooyinkeenna iyo barnaamijyadeenna dhis kartidaada aqoon- iyo xirfadeed.
Tijaabin in aad wax dhigatid, wax ka ogaw awoodahaaga ku wada, helna waddo waxbarasho oo horay kuu geyneysa waxbarasho ama shaqo. Hawlaha wax qabashada ee ku aaddan in niyad u yeelidda, tababarashada farsamada wax dhigashada iyo in nuxurka diiradda la saaro waxaad ku noqoneysaa qof si fiican ugu diyaarsan in uu waxbarasho sii wato. Waxay taasi kordhineysaa fursadahaaga xagga shaqada.
Shaqooyinka badankoodu waxay u baahanyihiin waxbarasho aasaasi ah, haddii aad waxbarasho dugsi sare leedihidna waxay taasi kordhineysaa fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid. Taageerooyinkeenna kala duduwan waxaad fursad ugu haysataa in aad dhistid kartidaada aqoon-iyo khibradeed.
Si aad kor ugu qaaddid fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid waxaad kartidaada aqoon- iyo xirfadeed ku dhisi kartaa waxbarasho jaamacadeed ama mid ka sarreysa heerka dugsiga sare. Haddii aad Swiidhan ku cusubtihid, aadna leedihid xirfad ay jirto baahi aad u weyn oo shaqaale loo qabo waxaa sii jira fursado aad fara badan.
Heshiis u dhexeeya adiga, annaga iyo degmadaada oo ku aaddan in aad waxbarashada dadka waaweyn ee degmada ama dugsi shacbi oo dadka waaweyn ah aad dugsi sare ka dhiganeysid.